Mapisarema 100 Zvinoreva Vhesi Ndima | MINYENGETERO MARI
musha Mavhesi eBhaibheri Mapisarema 100 Zvinoreva Ndima Ndima
Nhasi tichange tichiita nezvePisarema 100 zvichireva ndima nendima. Mapisarema 100 nderimwe reMapisarema mazhinji mune chinyorwa anoisa zvakanyanya pakurumbidza Mwari. Sevanhu, hatigone kurerutsa iyo simba wekurumbidza. Zvese zvine chekuita nehukama hwaMambo David naMwari zvinoita kuti tizive kuti Mwari vanonyatsoda kurumbidzwa. Mambo David aionekwa semurume anemoyo waMwari kwete nekuti aive mambo mukuru weIsreal, asi nekuti ainzwisisa moyo wekurumbidza uye haana kuzombodzokera pakurumbidza Mwari.
Isu sevatendi zvakare tinofanira kunwa mweya wekurumbidza. Mwari ndiMwari uye Iye chete ndiye anofanirwa nerumbidzo yedu. Ngatikurumidze kusimudzira bhuku rePisarema 100 rine zvarinoreva vhesi nendima.
Shevedzerai kuna Jehovha nomufaro, imi nyika dzose. Shumirai Jehovha nomufaro; Uyai pamberi pake muchiimba.
Ndima yekutanga inoti ita ruzha rwemufaro kuna ishe imi nyika dzese. Izwi rekuti land mune ino mamiriro hazvireve pasi. Imwe shanduro yebhaibheri inoshandisa pasi, vanhu, nyika pachinzvimbo chevhu. Zvakakosha kuziva kuti izwi rekuti pano rinoreva zvakawanda kupfuura ivhu repanyama iro rinoshandiswa pakudyara zvirimwa kana kurera mhuka. Nyika mune ino mamiriro zvinoreva vanhu uye nyika yose.
Rudzi rwose rwevanhu rwungaite ruzha rwemufaro kuna ishe? Imhaka yekuti Mwari akatipa basa rekuona kuti chizvarwa chese chevanhu chinosvika pakuziva kuti Mwari ndiye mukurusa. Chinyorwa chiri mubhuku ra Matthew 28: 19-20 Endai naizvozvo muite vadzidzi vemarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurairai; uye tarisai, ndinemi nguva dzose, kunyange kusvikira pakuguma kwenyika. Ameni.
Takapihwa basa rekuita vadzidzi vemarudzi ose. Tine basa rekuvaunza kuna Kristu. Jesu akati kuvadzidzi vake tongai kusvikira ndauya. Isu takapihwa kugona kushanda munzvimbo yepamusoro. Kana isu tichidzidzisa vanhu nezvaMwari, rima richadzingwa kunze kwenyika uye ungano yese yevanhu vanogona kuita ruzha rwemufaro kuna ishe akavaponesa kubva mukutongwa kwechivi nerufu.
Shumirai Jehovha nomufaro, uyai pamberi pake muchiimba. Mubasa redu rekurumbidza Mwari, tinofanirwa kuuya pamberi pake nekuimba uye mudare rake nemufaro mumoyo medu.
Zivai kuti Jehovha ndiye Mwari;
Ndiye wakatiita, hatizi isu pachedu;
Tiri vanhu vake uye makwai emafuro ake.
Izvi zvakare munzvimbo yekudzidzisa nekuraira vanhu nezvaMwari. Tinofanira kuziva kuti ishe, ndiMwari. Mwari ndiye akatiita uye kwete isu pachedu. Zvese zvatinazvo muhupenyu zvinobva kunaShe. Hatina chinhu. Chinyorwa chino chinoita kuti tinzwisise kuti zvinhu zvese zvakanaka zvinobva kuna ishe.
Kana tikanzwisisa izvi, zvinozotibatsira kukunda mweya wekuzvikudza mumoyo medu. Tichanzwisisa kuti zvese zvatiinazvo takazvipihwa naMwari. Uye isu tinofanirwa kushandira Mwari nekuropafadza vanhu. Ndima yechipiri inotaura kuti isu vanhu vake uye isu tiri makwai emafuro ake. Kristu ndiye mufudzi, isu tiri makwai. Izvi zvinoratidza kuti Mwari anotitarisa kunyangwe isu tisingazive.
Ndiye mufudzi uye isu tiri ake amakwai ake. Anotitarisira uye anovimbisa kuti hapana chakaipa chinosvika pedyo nesu. Mwari vatidzivirire kubva kumapere ehupenyu anogona kupinda mukati memakwai kuti avapedze. Nyasha dzaMwari dzakakwana uye kudzivirirwa kwake kunogara kuri pamusoro pedu. Izvi zvinowedzera kutsanangura kuti sei tichifanira kurumbidza Mwari, nekuti Ndiye mufudzi mukuru anovimbisa kuti hapana kana gwai rimwe rinoshayikwa.
Pindai pamasuwo ake muchivonga,
Uye mumavazhe ake nekurumbidza.
Mutendei, murumbidze zita rake.
Nekuti Jehovha akanaka;
Tsitsi dzake dzinogara nekusingaperi,
Uye chokwadi chake chinogara kusvikira kumarudzi ose.
Rugwaro runoti usazvidya moyo nechinhu asi muzvinhu zvese kuburikidza neminyengetero minamato nekutenda ita kuti chikumbiro chako chizivikanwe kwaari. Mwari vanokoshesa kurumbidzwa kwevanhu Vavo. Kana isu tichitenda Mwari nechimwe chinhu chaakatiitira, chinovhura musuwo wezvimwe zvinhu zviitwe. Hatifanire kunetseka kana tiri pamberi paIshe. Kunetsekana tiri pamberi paMwari kunongoratidza kushaya kwekutenda kwedu kuti Mwari ari pamusoro pemamiriro ese.
Chinyorwa chinoti pindai mukati mamasuo ake nekutenda uye mudare rake nekurumbidza. Kana isu tiri pamberi paMwari, hapana chimwe chinhu chine basa. Nekuti isu tiri kune sosi yekusika uko zvese zvinogadzirwa. Ndima inotevera inoti tenda kuna ishe uye muropafadze zita rake Tinofanira kuedza kugara tichitenda ishe, kwete chete nekuti achazoita asi nezve zvinhu zvaAkaita. Jehovha akanaka uye tsitsi dzake ndedzisingaperi uye chokwadi chake chinobva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chimwe.
Tsitsi dzaIshe isingaperi. Tsitsi dzaishe isungano pakati paMwari nemunhu. Mwari pavakaita chibvumirano naAbrahama, Isaka naJakobho, Vakawedzera huchokwadi hwezvibvumirano zvavo kuvana veIsreal. Kana Mwari vaita vimbiso, Vanozadzisa. Chinyorwa chino chinoita kuti tinzwisise kuti Mwari haasi munhu anoreva nhema uye Iye haasi Mwanakomana wemunhu kuti atendeuke. Anokudza izwi rake rakakora kupfuura zita rake.
Tinofanira kurumbidza Mwari nekuti haazi munhu wekureva nhema uye haasi Mwanakomana wemunhu kuti atendeuke. Tinofanira kumutenda nekuda kwenyasha, tsitsi uye nekutinzwira sevanhu nemakwai mumafuro ake. Zita raMwari ngarirumbidzwe nguva dzose.
Previous nyayaZvikonzero zvishanu Zvinoitika Kuti Tive Nemuedzo
inoteveraMapisarema 78 Zvinoreva Ndima Ndima
20 Kununura Munamato Kuti Bvisa Kutuka Kwemhuri